I-15KW seriesEV ukushaja ama-rectifieris enzelwe ishaja enkulu ye-EV DC. Inamandla amakhulu, ukusebenza kahle okukhulu, amandla aphezulu amandla, ukuthembeka okuphezulu, ukulawula okuhlakaniphile nokubukeka okuhle kokubukeka. Amasu wokulawula edijithali ashisayo futhi ahlakaniphile futhi asebenza ngokubambisana ukuvimbela ukubikezela ukwehluleka nokuqinisekisa ukuthembeka okuphezulu.
I-UR75020-W yokushaja imodyuli yenzelwe ishaja enkulu ye-EV DC. Inezinzuzo zokulungiswa okuphezulu kwamandla, ukusebenza kahle okuphezulu, amandla amakhulu, ukuthembeka okuphezulu, ukulawula okuhlakaniphile, ukubukeka okuhle nokuhlala okuncane. Idizayini ephezulu yokwethenjelwa kwehadiwe namasu wokulawula edijithali asebenza ndawonye ukuvikela ukubikezela ukwehluleka nokuqinisekisa ukuthembeka okuphezulu.
UR50060-W, B, EV yokushaja imodyuli yenzelwe i-EV DC ishaja enkulu. Inezinzuzo zokulungiswa okuphezulu kwamandla, ukusebenza kahle okuphezulu, amandla amakhulu, ukuthembeka okuphezulu, ukulawula okuhlakaniphile, ukubukeka okuhle nokuhlala okuncane. Idizayini ephezulu yokwethenjelwa kwehadiwe namasu wokulawula edijithali asebenza ngokubambisana ukuvimbela ukubikezela ukwehluleka nokuqinisekisa
I-UR100030-SW (B) i-module yokushaja ye-EV eyenzelwe ngokukhethekile ishaja enkulu ye-EV DC. Inobubanzi obubanzi bamandla wokukhishwa kwamandla njalo. Futhi ine-factor ephezulu yamandla, ukusebenza kahle okuphezulu, ukuminyana kwamandla amakhulu, ukuthembeka okuphezulu, ukulawula okuhlakaniphile nokubukeka okuhle kokubukeka. Amasu wokulawula edijithali ashisayo futhi ahlakaniphile futhi asebenza ngokubambisana ukuvimbela ukubikezela ukwehluleka nokuqinisekisa ukuthembeka okuphezulu.